Umdlalo odumileyo weNintendo 64 iTurok uza kwiLinux ngeStam | Ubunlog
Umdlalo odumileyo weNintendo 64 iTurok uza kwiLinux ngeStam
Ubumnyama | | Imidlalo
Si Nawuphi na umntu ebenekhonsoli yeNintendo 64 kumakhaya abo Bonwabele imidlalo emikhulu kunye nezihloko kunye naye Yeyiphi eyona iphambili kule khonsoli kwaye isala iklasikhi engakhange iphume ngesitayile nguMario 64.
Kodwa ayisiyiyo kuphela isihloko esasinokubaluleka okukhulu, mhlawumbi uninzi lwenu luyayikhumbula iTurok, isaga yabadlali bevidiyo yokudubulaa, apho umlinganiswa ophambili ujongene needinosaurs kunye nezidalwa ezahlukeneyo. Isekwe kuthotho lwee-comics ezinegama elifanayo. Umlinganiswa ophambili ligorha elinobuchwephesha, ihlala ikhethekileyo ekuzingeleni iidinosaurs.
Ngoku lo mdlalo wevidiyo ubuyiselwe kwakhona kwinkcazo ephezulu kwaye iyafumaneka ukudlala kwiLinux, emva kokufakwa kwiXbox One.
Iphuhliswe ziiNight Dive Studios, I-Turok ehlaziyiweyo iyaphucuka kwimidlalo yangaphambili yomdlalo kwiPC.
Enkosi kumzamo omkhulu wabaphuhlisi bayo ukuyaNgoku singasonwabela esi sihloko kulwabiwo lwethu oluthandayo lweLinux. Ukuvuselelwa ngokutsha kweTurok kuyafumaneka ngeSteam kwaye kunokuthengwa ngentlawulo encinci.
1 Malunga nale nguqulo intsha yeTurok
2 Izidingo ukuze ukwazi ukufaka iTurok kwiLinux
Malunga nale nguqulo intsha yeTurok
En Olu hlaziyo lutsha lweTurok sinokulufumana kuyo, ezibukhali nezichanekileyo zemizobo ye-HD, i-OpenGL backend kunye noyilo oluthile oluphuculweyo, ukongeza kwimowudi yokudlala ephuculweyo, ukukhanya okunamandla, iimpembelelo zamanzi phakathi kwezinye ziye zaphuculwa.
De ezinye izinto ezintsha kunye nokuphuculwa esinokukufumana kolu hlengahlengiso sinokuma ngaphandle:
CD ukhetho lwengoma yokuqala yePC
Inketho yokumisela ikhibhodi, imouse kunye negalelo lemidlalo yepad
Uloyiso olutsha lweStam
Ukutshixwa kweetsheki ngoku kugciniwe
Imowudi yovavanyo yexesha elitsha.
Turok Idibanisa izinto zentshabalalo (IiFPS), engcwabeni Raider (ukuhlola, iphazili) kunye umbono okumGangatho Park (Iidinosaurs, izixhobo eziyindumasi).
Ihlabathi apho ixesha lingenantsingiselo, kwaye ububi abunamida. Ukuchithwa kwilizwe elidlulileyo, umkhosi ojikelezayo ohamba ixesha elide uhanjiswe kwilizwe lasendle eliqhekeke ngxabano.
Kumdlalo wena pBanokuphonononga imeko ye-3D, apho kuya kufuneka bafumane iziqwenga zento yakudala eyaziwa ngokuba yi "Chronoscepter".
Ukufumanisa zonke iinxalenye ze-8, kuya kufuneka ubaleke, utsibe kwaye unyuke kwihlabathi elinobundlongondlongo, ngelixa uxhobe ngesinye sezixhobo ze-14 zobuchwephesha.
Izinto azikho lula njengoko zibonakala ngathi: Kuya kufuneka usombulule iiphazili, uphambuke kwimigibe kwaye ulwe needinosaurs kunye nabaphambukeli phantse kuzo zonke iimeko emdlalweni.
Ukuba kukho nakuphi na ukungalunganga, uyilo lwenqanaba.
Xa kuthelekiswa nemigangatho yanamhlanje ilizwe lomdlalo libonakala lilula. Inkcazo-ntetho ithembekile kumdlalo wokuqala, ewe, kodwa kule mihla imeko engcono kulindeleke kwimidlalo yanamhlanje.
Umdlalo unikezela ngokuzonwabisa ngokuzonwabisa, ogqibeleleyo kwabo bafuna ukuphinda baphile ebuntwaneni babo kwaye bakhumbule ezo yure zichithwe ngasemva komabonwakude bedlala esi sihloko sikhulu ekhaya.
Izidingo ukuze ukwazi ukufaka iTurok kwiLinux
I-Turok kufuneka isebenze kakuhle kwiinkqubo ezininzi ze-Linux, njengangaphakathi iingcebiso abasinika zona ukuze sikwazi ukonwabela oku isihloko ngaphandle kweengxaki amaqela ethu kufuneka abe:
OS: Ubuntu 12.04 64 bits okanye efanayo
Inkqubo: I-Intel engundoqo ye-Intel okanye i-AMD 2.0 GHz
Imemori: 1GB RAM
Imizobo: I-Intel 787 Express okanye ilingana nenkxaso ye-OpenGL 2.1 Core
Ukugcina: 800 MB yendawo ekhoyo
OS: Ubuntu 16.04 64 bits okanye efanayo
Inkqubo: Intel Core i5-2300 2.8 GHz / AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz ephezulu okanye elinganayo
Imemori: 2GB RAM
Imizobo: I-NVIDIA GeForce 7800/7900/8600 uthotho, ATI / AMD Radeon HD 2600/3600 okanye X1800 / X1900 uthotho ngenkxaso ye-OpenGL 2.1 Core
Lo mdlalo ayinankxaso yeenkqubo ezingama-32 ke ifumaneka kuphela kuyilo lwe-bit-64.
Okokugqibela, ukufumana lo mdlalo, kufuneka bayenze ngokuthe ngqo kwivenkile yeSteam apho banokuyidibanisa kwilayibrari yabo yemidlalo ngesixa esilinganiselweyo, ikhonkco yile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Umdlalo odumileyo weNintendo 64 iTurok uza kwiLinux ngeStam
Uyifaka njani iNvidia yevidiyo kwi-Ubuntu 18.04?
I-6 yezona dock zidumileyo ze-Ubuntu kunye neziphumo